Sida loo sameeyo keyd Windows 10: casharka ugu dhameystiran - Tilmaamaha Teknolojiyada | Golaha Moobaylka
Sida loo sameeyo keyd Windows 10
Ignacio Sala | | Nidaamyada hawlgalka, Windows
Markii kombuyuutarku bilaabay inuu beddelo warbaahinta jireed ee waraaqda, waajibaadka la xiriira wuxuu dhashay: hayaan. In kasta oo fursadaha dukumiinti ama fayl qaab muuqaal ahaan baaba'ayaa ay aad u hooseeyaan, haddii aan ka hadalno taakuleynta dijitaalka ah, haddana fursadaha ayaa sii kordhaya sababo la xiriira arrimo kala duwan oo ciyaarta soo gala.
Warbaahinta dijitaalka ahi waa cunsurro elektaroonik ah oo shaqada joojin kara wakhti kasta, mararka qaarkoodna sabab la’aan. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale saameyn ku yeelan karaan barnaamijyada xun (virus, malware, ransomware ...) markaa waa baahi guud oo xisaabeed samee nuqullo nuqul ah.
1 Dhinacyada xisaabta lagu darsado marka la samaynayo nuqullo nuqul ah
1.1 Waxa muhiimka ah waa dukumiintiyada, sawirada iyo fiidiyowyada
1.2 Ha isticmaalin xijaab adag
1.3 Isticmaal darawal adag oo dibadda ah
1.4 Kaydinta daruuraha
1.5 Nuqulo kordhin ah
2 Kaydinta Windows 10
2.1 Macluumaad guud
2.2 Samee keyd kumbuyuutar ah
2.3 Ka reeb faylkan
2.4 Dib ugu laabo wadid kale
2.5 Fursadaha qaabeynta ee la xidhiidha
3 Sidee dib loogu soo celiyaa kaydinta Windows 10
3.1 Soo celi hayaan dhammaan faylasha
3.2 Soo celi kaydinta faylasha la xushay
3.3 Ku soo celi faylasha meel ka duwan tii hore
Dhinacyada xisaabta lagu darsado marka la samaynayo nuqullo nuqul ah
Marka la sameynayo nuqullo nuqul ah, waa inaan tixgelinno arrimo dhowr ah:
Waxa muhiimka ah waa dukumiintiyada, sawirada iyo fiidiyowyada
Dhowr sano ka hor, rakibo nuqul Windows ah waxay qaadatay saacado aad u tiro badan, kaliya maahan xawaaraha qalabka, laakiin sidoo kale waxaa sabab u ah waqtiga lagu qaatay in la rakibo, mid mid, darawallada dhamaan qeybaha ka mid ahaa qalabkaas.
Tani, waxay ku qasabtay Windows inay na siiso suurtagalnimada samee gurmad buuxa nidaamkayaga hawlgalka oo ay weheliso faylalkayaga, suurtagalnimada aan hadda la heli karin. Windows 10 kaliya ayaa noo ogolaanaya inaan ka sameysano nuqul keyd ah feylashayada.
Ha isticmaalin xijaab adag
Isla diskka adag, waxaan ka abuuri karnaa qormooyin kala duwan, kuwaas oo aan ka badnayn unugyada diskiga isticmaal qalab isku mid ah oo wax lagu kaydiyo, sidaa darteed haddii diskiga adag uu burburo, waan waayi doonnaa macluumaadka oo dhan, maxaa yeelay dhammaan unugyada ayaa joojin doona shaqada.
Isticmaal darawal adag oo dibadda ah
Isticmaal darawal adag oo dibadda ah Si loo sameeyo nuqullo keyd ah ayaa ah habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo taas haddiiba ay dhacdo in qalabkeenna ay la soo deristo waxoogaa dhibaato ah oo saameyn ku yeelanaya sharafnimadiisa, xogta nuqulku waa laga soocay qalabka.
Sida dib loogu dajiyo Windows 10 si deg deg ah oo nabad ah
Adeegyada keydinta daruuraha ayaa ah habka ugu dhaqsaha badan uguna raaxada badan ee had iyo jeer lagu haysto nuqul ka mid ah dukumiintiyadayada iyada oo loo marayo aalad kasta, iyadoo ah OneDrive, adeegga sida ugu fiican ugu milma Windows 10.
Intaa waxaa dheer, naguma qasbineyso inaan soo dejino dhammaan waxyaabaha aan ku kaydsannay daruuraha, laakiin kaliya faylasha aan ku shaqeyneyno xilligaas oo aan dib u soo gelineyno markaan dhammeyno, waa nidaam OneDrive waxay daryeeshaa inay si otomaatig ah u sameyso. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan u isticmaalno booska ku yaal darawalkeenna adag ujeeddooyin kale oo aan shaqo ku lahayn.
Nuqulo kordhin ah
Nuqulada nuqul dhaqameed waxay noo ogolaaneysaa inaan sameysano nuqulo sax ah dukumiintiyada kujira cutub, ku badalida xogta ku jirta bartilmaameedka wadista kuwa cusub. Tani waxay dhibaato noqon kartaa markaan u baahanahay inaan marinno noocyo hore oo feyl ah ama aan soo ceshanno faylal aan horay u tirtirnay.
Nuqulada kororka ayaa mas'uul ka ah sameynta nuqulo kayd ah oo keliya faylasha aan wax ka beddelnay ama aan ku abuurnay kuwo cusub, haynta qoraalkii hore keydadkii hore.
Kaydinta Windows 10
Windows 10 waxay na siisaa qalab aan ku dhaqaaqno nuqulo nuqul ah waxa ugu muhiimsan kooxdeena: faylasha, ha ahaato dukumiinti, sawirro ama fiidiyowyo. In kasta oo xalka ay Windows 10 na siiso uusan ahayn midka kaliya ee hadda laga heli karo suuqa, waa midka na siiya astaamaha ugu fiican, marka lagu daro in gebi ahaanba xor loo yahay oo asal ahaan lagu dhex daray nidaamka.
Mid kale oo ka mid ah awoodaha nidaamka keydka ee Windows uu na siinayo ayaa ah inaan sameyn karno nuqulo koror ah, taasi waa, sameynta nuqullo nuqul cusub ah oo dukumiintiyadayada ah, taas oo noo ogolaaneysa inaan marinno noocyadii hore ee feylasha ama xitaa aan soo ceshano feylasha la tirtiray waqti hore.
Sida loo horumariyo waxqabadka Windows 10 fikradahan
Haddii keydku uusan qaadan boos badan, waxaan ka dhignaa maalin kasta diskiga adag ee aan ka sameyneyno waa mid weyn oo ku filan, waxaan u habeyn karnaa nidaamka keydka si markaa xafid dhamaan nuqulada ilaa ugu badnaan 2 sano. Haddii aan bilowno in aan booska ka dhammaanno, nidaamka laftiisa ayaa tirtiri doona nuqulada ugu da'da weyn si boos looga dhigo kuwa cusub.
Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan aasaasno inta jeer ee aan dooneyno inaan sameyno keyd dhammaan xogteenna: daqiiqad kasta 1, saacad kasta, 12 saacadood kasta, maalin kasta ... Mar haddii aan si cad uga hadalno dhammaan faa'iidooyinka iyo wanaagga nidaamka keydku na siinayo Windows 10, hoosta waxaan ku tuseynaa tillaabooyinka la raacayo ku samee Windows 10.
Ugu horreyntii, waa inaan marin u helnaa ikhtiyaarrada qaabeynta Windows 10, iyada oo loo marayo kumbuyuutarka toobiye Windows key + i oo guji Cusboonaysiinta iyo amniga.
Qeybtaan gudaheeda, sadarka bidix, guji Soo celinta. Sadarka midig, guji Kudar wadis gudahood qaybta kaabta oo leh Taariikhda Faylka.
Markaas daaqad sabaynaysa ayaa la soo bandhigi doonaa dhammaan qaybaha aan ku xirnay qalabkeenna oo ay weheliso wadarta guud ee kaydinta. Haddii aan kaliya ku xirnay hal cutub, waa inaan dooranaa midka la muujiyay.
Markaan dooranno cutubka aan ku sameyneyno keydka, furaha firfircoon ayaa la soo bandhigi doonaa Qaado faylalkeyga keyd toos ah. Si loo helo xulashooyinka keydka, waa inaan gujnaa Fursado badan.
Hoos waxaa ku yaal daaqad cusub oo ka kooban 5 qaybood:
Qaybtani waxay ina tusaysaa wadarta guud ee keydka hadda. Waqtigan xaadirka ah, waxaan qaabeyneynaa kaydinta, markaa waqtigan xaadirka ah waxna kamaanaan sameynin, wadarta guudna waa 0 GB. Waxay sidoo kale muujineysaa wadarta cabbirka keydinta wadida dibedda ee aan ku xirnay si aan u sameyno kaydinta.
Qeybtaan gudaheeda, gudaheeda Dib u dhig fayladayda, waxaan dejin karnaa waqtiga kala-baxa ee u dhexeeya mid kasta oo nuqullada keydka ah ee uu kumbuyuutarku sameeyo. Habka hooyo, keydka ayaa la sameeyaa saacad kasta, laakiin waxaan wax ka beddeli karnaa xilliyada soo socda:
Saacad kasta (asal)
Sidaan kor ku soo sheegay, nidaamka kaydinta ee Windows 10 wuxuu noo ogolaanayaa inaan samayno nuqulo koror ah, taas oo ah, nuqulo madaxbanaan oo kaydin kara kaliya faylasha wax laga beddelay, si aan u helno taariikhda feylasha aan abuurnay, wax ka bedelnay oo tirtirayn kumbuyuutarkayaga uu maamulo Windows 10. Qaybta Joogtee hayaan, waxaan sidoo kale haysannaa fursado dhowr ah:
Ilaa boos loo baahdo
Xulashadan ugu dambeysa ayaa ah tan ugu fiican ee la talin karo haddii aan dooneyno inaan xafidno taariikh ku saabsan dhammaan isbeddelada feylku ku jiray sanadihii la soo dhaafay, si kastaba ha noqotee, waxay u noqon kartaa xoogaa buunbuunin dadka isticmaala caadiga ah. Inkasta oo tani ay tahay ikhtiyaarka caadiga ah, dadka isticmaala guryaha, ee aan qorsheyneynin inay lacag badan ku qarash gareeyaan darawalka dibadda, waxay dooran karaan ikhtiyaarka Ilaa boos loo baahdo.
Xaaladdan oo kale, Windows 10 wuu tirtiri doonaa keydadka ugu da'da weyn si loogu helo meel cusub kuwa cusub. Nidaamkani waa mid otomaatig ah habka loo tirtiro nuqulada ugu da'da weyn waxaa la fuliyaa oo keliya marka boosku gaaban yahay oo aan qorsheyneyno inaan sameyno keyd.
Samee keyd kumbuyuutar ah
Qaybta xigta ayaa ina tusaysa fayl default in Windows 10 ku dari doono keydka. Haddii mid ka mid ah feylasha la fikiray uusan ku jirin macluumaad aan dooneyno inaan xafidno, waan ku riixi karnaa oo gujin karnaa xulashada 'Remove'.
Ka reeb faylkan
Qeybtaan ayaa noo ogolaaneysa ka saar fayl keydka ku jira gudaha fayl kale marka loo eego haddii ay ku jiraan nuqul nuqul ah. Tusaale ahaan: Marka la fiiriyo galka Desktop-ka waxaa lagu soo daray keydka. Haddii aan ku hayno galka desktop-ka kumbuyuutar aanan dooneynin in lagu daro nuqul, waa inaan ku darnaa qeybtaan.
Dib ugu laabo wadid kale
Haddii cutubkii markii hore aan dooranay uu si dhakhso leh u yaraaday oo aan dooneyno inaan adeegsanno mid cusub, waa inaan u galnaa qaybtaan Jooji isticmaalka unugga. Markii aan joojino isticmaalka darawalka aan ilaa hada isticmaalnay, waa inaan bilownaa hawsha kaydinta mar labaad bilawga, samaynta wadista si loo sameeyo nuqulada keydka oo aan u xusho fayllada aan dooneyno inaan ku darno.
Fursadaha qaabeynta ee la xidhiidha
Qeybta xulashada qaabeynta qaabeynta waxay noo ogolaaneysaa inaan helno qaabeynta horumarsan, halka aan awoodno arag dhammaan keydadka aan sameynay ama maxaa isku mid ah, taariikhda keydka ah. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ka soo ceshano feylal keyd ah oo aan horey u sameynay si madax banaan oo aanan ku jirin dufcado.
Mar alla markii aan u qaabeyno hawlgalka nuqullada nuqullada ah, faylalka aan dooneyno inaan ku darno ama ka saarno, waqtiga u dhexeeya nuqulada iyo waqtiga la hayn doono, waa inaan Abuur kaydinta koowaad si aan u bilowno inaan helno dhammaan xogteenna oo ammaan ah haddii ay dhacdo in darawalkeenna adag, ama kumbuyuutarka oo dhan, uu joojiyo shaqada.
Si loo bilaabo hawshan, waa inaan gujino Samee keyd hadda. Nidaamkan waxaa lagu fuliyaa asalka iyada oo ay adag tahay in wax saameyn ah ku yeesho nidaamka waxayna qaadan doontaa waqti ka badan ama ka yar iyadoo ku xiran wadarta guud ee faylasha aan dooneyno inaan nuqul ka dhigno.
Sidee dib loogu soo celiyaa kaydinta Windows 10
Markaan uqeybino nuqulkeena Windows 10 si otomaatig ah aan u daryeesho nuqulada nuqul ee asalka, waa inaan ogaano sideen u soo celin karnaa.
Nuqulada keydku waxay ku keydsan yihiin cutubkii aan horey uga dhex dhignay galka faylka. Buuggan dhexdiisa, waxaan ka heli doonnaa keydkeena gudahood galka magaca isticmaalaha koontada kooxdayada.
Taasi micneheedu waa maxay? Windows 10 wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku isticmaalno isla wadashaqeyntii banaanka ee gudaha dhammaan qalabka aan dooneyno inaan ka sameysano nuqullo keyd ah, iyaga oo gacanta ku qabanaya oo aan barnaamij mooyeynin illaa aan ku xirno unugga shabakadeena, halkaas oo dhammaan kombiyuutarada ay ku xirmi karaan meel fog oo ay u isticmaali karaan isla aaladda wax lagu keydiyo si ay nuqulada uga dhigaan.
Gudaha galkaas, waxaan ka heli doonnaa dhowr fayl, dhammaantoodna lambarro leh, leh magaca kooxdayada (yaan lagu wareerin magaca isticmaalaha). Gudaha galkaas, waxaan ka helaynaa dhammaan faylasha qayb ka ah keydka (galka) Data), taas oo noo oggolaaneysa inaan si madax-bannaan u helno haddii aan nuqullada ka soo celino Windows 10.
Mar kasta oo gurmad la sameeyo, waxaa la sameeyaa tusaha cusub. Haddii aynaan abuurin wax dukumiinti ah ama aan wax ka bedelin mid ka mid ah feylasha ku jira buuggaagta ee qayb ka ah keydkii aan horey u sameynay, keydkaas oo keliya Waxay ka koobnaan doontaa nuqul qaabeynta qalabka (guntin qaabeynta), maahan feylasha, maadaama ay nuqul ka koobnaan laheyd (nuqullo koror ah).
Si loo helo nidaamka keydka oo aan awood ugu yeelano soo celintooda, waa inaan marin u helnaa qaabeynta Windows 10 (furaha Windows + i), Cusbooneysiinta iyo keydinta, Kaydinta iyo khaanadda midig xulashooyinka badan iyo Ka soo celi faylasha kaydinta hadda.
Soo celi hayaan dhammaan faylasha
Haddii aan rabno inaan soo celinno kaydinta dhammaan faylasha aan ku soo darnay keydka, kaliya waa inaan gujino labada fallaadhood ee ku yaal qeybta hoose ee daaqadda, oo xulo maalinta ugu dambeysa ee kaydku qabtay shaqadaada oo guji badhanka cagaaran ee la yiraahdo Ku soo celi meeshii asalka ahayd.
Soo celi kaydinta faylasha la xushay
Haddii aan kaliya dooneyno inaan soo celino feylal taxane ah, waa inaan tagnaa galka halka ay ku yaalliin, ka xusho oo guji badhanka cagaaran Soo celi goob asal ah.
Ku soo celi faylasha meel ka duwan tii hore
Qaybta koowaad ee qaybtaan, waxaan ku muujiyey in kaydku aanu waxba ka badnayn nuqul feylasha sida tusmooyinka la xushay ee wadida dibedda ah, oo loo kala saaro koobiga maalmo iyo saacado. Gudaha faylladaas waxaa ku jira faylalka asalka ah.
Haddii aan dooneyno inaan feylasha ku soo celino meel kale, waa hawl aad u adag oo waqti ayey qaadaneysaa, maadaama ay nagu qasbeyso inaan booqano dhammaan fayllada si aan u hubino maxay yihiin noocyadii ugu dambeeyay faylasha la soo guuriyey.
Tani waa mid ka mid ah cilladaha nuqulada kororka ah, laakiin isla markaa waa wanaaggooda ugu weyn, maadaama loo qorsheeyay in la yareeyo booska iyo waqtiga nuqulada, in kasta oo ay nagu qasbeyso inaan adeegsanno isla codsigii aan ku abuurnay nuqulada si aan dib ugu soo celino feylasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Sida loo sameeyo keyd Windows 10
Sida loo soo dejiyo LibreOffice Writer bilaash ah lana cusboonaysiiyay 2020